Ireo sary ara-panatanjahantena amin'ny Lalao Olaimpika nanomboka tany Tokyo 1964 ka hatramin'ny Rio 2016 | Famoronana an-tserasera
Piktogramy fanatanjahantena amin'ny Lalao Olaimpika nanomboka tany Tokyo 1964 ka hatramin'ny Rio 2016
Mitohy ny lalao Olaimpika ao Rio ary ny hetsika ara-panatanjahantena rehetra amin'izao fotoana izao dia mitarika antsika ho eo alohan'ny televiziona mankany jereo ny atletantsika mifaninana amin'ny latabatra medaly. Hetsika tsy azo lavina ho an'ny olona an-tapitrisany izay hanana karazana hetsika ara-panatanjahantena amin'ny taranja rehetra mandritra ireo andro ireo.
Avy eto amin'ny Creativos Online no zarainay anio ny sary ara-panatanjahantena amin'ireo fitsipi-pifehezana rehetra izay nifindra avy tany Tokyo 1964 ka hatramin'ny Rio 2016 izay niasa tamin'ny mpanao sary sy famoronana hafa izay nametraka ny fahaizany tamin'ny fanompoana ara-panatanjahantena. Andao hofantarina izy ireo.
5 Moskoa 1980
9 Atlanta, NY 1996
11 Atena 2004
14 Reniranon'i 2016
Ny mpamorona dia Yoshiro Yamashita sy Masaru Katzumie. Ny tanjona dia ny hampivelatra ny fifandraisana an-tsary afaka mahomby amin'ny fampahalalana na ny mpandray anjara na ny mpijery satria nitombo isa ny isam-pirenena tamin'ny lalao. Izany no antony mahatonga ny endrika ho tsotra sy mahitsy.
Vondron'ireo famoronana avy ao amin'ny Departemantan'ny Urban Design ho an'ny fikolokoloana ny Lalao Olaimpika, izay misy an'i Lance Wyman. Ny iray amin'ireo mampiavaka an'ity sary ara-panatanjahantena ity dia izy irery ampianarina ny ampahan'ny vatana atleta na fitaovana mila fanampiana. Miresaka ny kolontsaina meksikana sy ny tantarany izy ireo.
Manaraka ny tontolon'ny Tokyo 1964 hanehoana ireo silhouette amin'ny endrika mahazatra amin'ny taranja fanatanjahantena rehetra. Ny fanamafisana dia ny fitsipika geometrika sy sary mba hahatonga azy io ho fenitra. Izany no izy zoro dia 45 na 90 degre ary ny silhouette dia novokarina niaraka tamin'ny ampahany voafaritra tamin'ny vatana.
Otl Aicher no mpamorona azy, ary i Georges Huel sy Pierre-Yves Pelletier no nanamboatra azy. Eto ny fitohizan'ny sary famantarana teo alohany. Ny fanovana dia natao ho an'ny pictograms sasany, indrindra ho an'ny serivisy, na dia tsy miseho amin'ny sary zaraina aza ireo.
Ny mpamolavola dia Nikolai Belkov ary ny tsipika ampiasaina dia amin'ny lafiny 30 sy 60 degre hanome ny fiheverana ny fahalalahana amin'ny sary. Ny zoro amin'ny silhouette dia boribory ary ny vatana dia iray monja, afa-tsy ny loha.
Ny mpamolavola dia Keith Bright sy Associates. Ezahana ny hahazoana ny zon'ny sary an-tsary lalao Munich, saingy mora vidy kokoa mamorona vaovao, tapaka io fanapahan-kevitra farany io. Ny fitsipiky ny famolavolana dia: mazava, fifandraisana, tsy fitoviana, fahamendrehana ary azo ampiharina.
Ny fikambanana niandraikitra ny lalao mihitsy no naniraka ny mpamorona. Namorona andiana piktogramy vaovao ho an'ny lalao Aziatika. Fifanarahana amin'ny fizarana efatra: loha, vatan-kazo, sandry sy tongotra; nojerena manokana ny fifandraisana misy eo amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana.
Josep María Trias no niandraikitra ny famolavolana. Anaovy ny lantom-peony eo amin'ny lafiny kanto miaraka amin'ilay fampitahana amin'ilay tandindon'ny lalao Olaimpika, izay noforonin'ilay mpamorona iray ihany. Tahaka ny toetran'ny marika olympika, ampahany telo no ampiasaina handrafetana ireo sary: ​​lohany, sandry ary tongotra. Tsy naseho velively ny vatan-kazo, fa soso-kevitra avy amin'ny singa hafa.
Atlanta, NY 1996
Ny mpamorona dia Malcom Grear ary izy aingam-panahy avy amin'ireo tarehimarika ao Gresy fahizay. Volavola mahazatra miaraka amina rohy mankany amin'ny niavian'ny Lalao Olaimpika taloha. Ny fomban'ny silhouettes dia manandrana ny ho zava-misy ary manakaiky ny endrik'olombelona.
Ny silhouette an'ny piktogramy dia vita toy ny hoe boomerangs izy ireo, ny iray ho an'ny tongotra ary ny roa kely ho an'ny sandry. Manokana fiheverana manokana ny kolotsaina Aboriginal Aostralianina Ny tanjona dia ny ho mavitrika mba hahitana ny adjectives ny hakingana sy ny hafainganan'ny atleta.
Ny mpamorona dia ATHOC 2004. aingam-panahy avy amin'ny kolontsain'ny Gresy fahiny, ny silhouette an'ny atleta sy ny tsipiriany amin'ny tsipiriany dia manandrana mampahatsiaro ny sambon'i Gresy fahiny. Ny sombin'ireo sambo taloha ireo dia nanjary aingam-panahy ho an'ny endrika tsy ara-dalàna an'ny sary sy sary tsirairay.
Ny endrika dia nirahina ho an'ny Oniversiten'i Tsinghua. Ireo piktograma dia nentanin'ny aingam-panahy avy amin'ny soratra amin'ny taolana sy varahina an'i Sina Sina izay namboarina tamin'ny fomba maoderina sy tsotra kokoa.
SomeOne Design Agency no niandraikitra ny famolavolana. Noforonina tamin'ny endrika roa samy hafa: kinova silhouette natao ho an'ny fampiasana mahazatra sy kinova mavitrika izay aingam-panahy avy amin'ny sarintany London Underground ary izay nampiditra tsipika izay mivelatra ivelany amin'ny isa.
Ilay andiany iray ihany ho an'ny fikambanana no niandraikitra ny famolavolana. Ny silhouette an'ny atleta dia natsangana miorina amin'ny endritsoratra ofisialy Rio 2016. Ity endri-tsoratra ity dia aingam-panahy avy amin'ny tandindon'ny Lalao Olaimpika sy ny fiolahana ny tontolon'ny Rio XNUMX. ny fluidity ny tsipika mifantoka amin'ny fanahafana ny fihetsiky ny atleta amin'ny hetsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Piktogramy fanatanjahantena amin'ny Lalao Olaimpika nanomboka tany Tokyo 1964 ka hatramin'ny Rio 2016
Ireo finalista ho lasa sary famantarana vaovao an'i Mozilla
Manaova sary doodles hikarohana sary ao anaty 500px Splash